Sɛnea Wode Onyankopɔn Ho Asɛm Bɛkyerɛkyerɛ Wo Mma | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
Wo ne wo ba nsua adebɔ ho adeɛ ma ɔnhu Onyankopɔn na ɔnnɔ no
Sɛ wo mma bɛdɔ Onyankopɔn a, gye sɛ wɔhu biribi a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn te ase na ɔdɔ wɔn. Sɛ wɔbɛnya ɔdɔ ama Onyankopɔn a, ɛsɛ sɛ wɔhu no yie. (1 Yohane 4:8) Nneɛma a ɛhia sɛ wɔnya ho mmuaeɛ no bi ni: Dɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ nnipa? Adɛn nti na Onyankopɔn ma amanehunu kɔ so? Dɛn na Onyankopɔn bɛyɛ ama yɛn daakye?—Kenkan Filipifoɔ 1:9.
Wopɛ sɛ wo mma dɔ Onyankopɔn a, ma wɔnhu sɛ wo nso wodɔ no. Ɛba saa a, wɔbɛsuasua wo.—Kenkan Deuteronomium 6:5-7; Mmebusɛm 22:6.
Wobɛyɛ dɛn akyerɛkyerɛ wo mma ama aka wɔn koma?
Onyankopɔn Asɛm wɔ tumi. (Hebrifoɔ 4:12) Enti boa wo mma ma wɔnnya mu nteaseɛ a ɛfata. Sɛ Yesu rekyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ a, na ɔtaa bisa wɔn nsɛm sɛnea ɛbɛyɛ a asɛm no bɛka wɔn koma. Afei nso na ɔtie wɔn na ɔkyerɛkyerɛ Twerɛnsɛm mu kyerɛ wɔn. Sɛ wo nkyerɛkyerɛ bɛka wo mma koma a, ɛsɛ sɛ wosua akwan a Yesu faa so kyerɛkyerɛeɛ no.—Kenkan Luka 24:15-19, 27, 32.
Sɛ mmɔfra no sua Bible na wɔhu sɛnea ɛfi tete Onyankopɔn ne nnipa adi nsɛm a, ɛbɛma wɔahu no yie na wɔadɔ no. Nneɛma bi wɔ www.jw.org/tw a ɛbɛtumi aboa mmɔfra ma wɔayɛ saa.—Kenkan 2 Timoteo 3:16.
Yesu ayɛ ɔdɔ ho nhwɛso pa ama okununom, ɔyerenom, awofo, ne mma. Dɛn na yebetumi asua afi ne hɔ?
Bra Bɛyɛ Yehowa Adamfo
Mmofra video, nnwom, ne dwumadi a yetumi tintim gu krataa so yi boa mmofra ma wosua nneɛma pii a ɛbɛma wɔayɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani.